“ဟိုတယ်ဘွတ်ကင် ကြိုလုပ်ထားလိုက်ပါ’ ရီးရဲယ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ဖိုင်နယ်အပြီးမှာ လီဗာပူးပရိတ်သတ်တွေကို ကတိပေးစကား ပြောလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့ - xyznews.co
ပဲရစ်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ယာဂန်ကလော့က လီဗာပူးအသင်းကို လာမည့်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ် ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့ ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ မနေ့ညက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ဖိုင်နယ်က ရှုံးပွဲကို ပြန်လည် ချေပဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပေမယ့်လည်း ပြင်သစ်မြို့တော်မှာ စိတ်ပျက်စရာ ရလဒ်နဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်က ၁၄ ကြိမ်မြောက် ဥရောပဖလားကို ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ဒီပွဲမှာ အခွင့်အရေးများစွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကာ မိုဟာမက်ဆာလား ဆာဒီယိုမာနေး နဲ့ ဂျိုတာ တို့ရဲ့ အပိုင် ဂိုးသွင်းမှုတွေကို မက်ဒရစ် ဂိုးသမား ကော်တွာက အ့ံဖွယ်လက်စွမ်းပြ ကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဗီနီရှက်ဂျူနီယာဟာ ဒုတိယပိုင်းမှာ မက်ဒရစ် အတွက် တစ်လုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုးကို သွင်းပေးခဲ့ပြီး ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်ဟာ ဒီရာသီမှာ လာလီဂါနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား တို့ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ အခုဆိုရင် ကလော့ရဲ့ လက်အောက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ် ၃ ခုမှာ ၂ ခုကို ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပြီး ပြိုင်ဘက်က ရီးရဲယ်ပဲ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဂျာမန်နည်းပြက သူ့ရဲ့အသင်းဟာ လာမည့်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ကို ထပ်မံ ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကလော့က “ကျွန်တော်တို့ ဖိုင်နယ်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ရောက်နိုင်လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကောင်းကို ရနေပါတယ်။ ကောင်လေးတွေဟာ တကယ့်ကို ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လှပါတယ်။ ဒီအုပ်စုဟာ တအားကို ထူးချွန်တဲ့ အစုအဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လာမည့့်ရာသီမှာလည်း ဒီလို ထူးချွန်တဲ့ အုပ်စုကို ပိုင်ဆိုင်နေမှာပါ။ လာမည့်ရာသီ ဖိုင်နယ်က ဘယ်မှာလဲ? အစ္စတန်ဘူမှာလား? ဟိုတယ်ဘွတ်ကင် ကြိုလုပ်ထားလိုက်ပါ။
အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှ ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရာသီဆိုတဲ့ ခံစားချက်တော့ ရှိမနေပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီရှုံးပွဲအတွက် နာရီအနည်းငယ်တော့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကစားပုံ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံမှုတော့ မရှိပါဘူး။ ခံစစ်ကို အထိုင်ကျတဲ့ ကစားကွက်နဲ့ ပြိုင်ဘက်မျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံစွာ ကစားသွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကန်ချက်တွေ အများအပြား ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်းလင်းတဲ့ အခွင့်အရေးတွေတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကော်တွာဟာ ထိပ်တန်းကာကွယ်မှု ၂ ခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ throw-in ကနေ တဆင့် ဂိုးပေးခဲ့ရတာပါ။ ဗယ်ဗာဒီဟာ ကန်သွင်းမှု လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဗီနီရှက်က နေရာကောင်းမှာ ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒါပါပဲ။
ကောင်လေးတွေဟာ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနေခဲ့တဲ့ အချိန်မှာပါ။ အဲဒီနောက် ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကွင်းလယ်ပိုင်းက နောက်ကို တအား ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ တန်ပြန်တိုက်စစ်နဲ့ အဓိက ခြိမ်းခြောက်သွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒုတိယပိုင်းမှာ ပိုမို ရဲရင့်စွာ ကစားသွားဖို့ half time မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကို ပတ်ပြီး ကစားနေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ကစားတာထက် စာရင် formation ထဲမှာ ပိုကစားသွားသင့်ပါတယ်။
အခုတော့ ခြားနားတဲ့ ခံစားချက်ကို ရနေပါတယ်။ ဖိုင်နယ်ကို တက်နိုင်ခဲ့တာဟာ သိပ်ပြီးတော့ မဆိုးလှပါဘူး။ ဒါကလည်း အောင်မြင်မှု တစ်မျိုးပေါ့။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရာသီကောင်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ကာ ဒီိရာသီမှာ ကာရာဘောင်ဖလားနဲ့ အက်ဖ်အေဖလား တို့ကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ် title race မှာ စီးတီးကို တစ်မှတ်တည်းနဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အပြင် ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ကိုလည်း တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Previous Article ‘ အင်္ဂလန်မှာ ကျွန်တော် လုံလောက်တဲ့ လေးစားမှု မရခဲ့ပါဘူး ‘ – ကော်တွိုက်စ်
Next Article အာဆင်နယ် အသင်း ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့်နဲ့ လွဲချော်ခဲ့တဲ့ အပေါ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ အူဘာမီယန်း